Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeybgalay xuska xasuuqii Rwanda (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kigali – Mareeg.com: Waxaa magaalada Kigali ee caasimadda dalka Ruwanda lagu qabtay xus weyn oo loo sameeyey xasuuqii sanadkii 1994-kii ka dhacay dalkaas, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 800,000 ruux oo u badnaa qowmiyadda Tutiga iyo qunyar socodkii Hutuga, dadkaas waxaa laayeey kooxo mayal adag oo kazoo jeeday qowmiyadda Hutuga.
Xuskaas waxaa ka qeybgalay madax kala duwan oo ka socotay dunida, waxaana ka mid ah ahaa madaxweynaha Soomaaliya xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehlinayo wasiirka arrimaha debadda C/raxmaan Ducaale Beyle.
Madaxda munaasbaddan goobjooga ka ahaa waxaa ka mid ahaa madaxweynha Uganda Yuweri Museveni, madaxweynha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynha Koonfurta Sudan Salva kiir Mayardit, Raysulwasaaraha Itoobiya Hailamariam Desiglin, Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki Moon, iyo Gudoomiyaha guddiga Midowga Africa Marwo Nkosazana Dlamini, mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin fara badan oo ka yimid dalaka galbeedka qaarkood.
Xuskan sanadkan oo hal-ku-dhigiisu ahaa xusuus, midnimo iyo dib u cusbooneyn ayaa lagu qabtay garoonka Amahoro ee magaalada Kigali, waxaana tooshka baroor diiqda ay si wadajir ah u shiday madaxweynaha dalka Ruwanda Paul Kigame iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey, Ban Ki Moon.
Munaasabaddan oo socotay muddo saacado ah ayaa waxaa laga sheekeeyey xasuuuqii foosha xumaa ee ebid ka dhaca aduunka sanadkii 1994 ka dib markii qowmiyadda Hutuga ay wacad ku mareen in ay gabi ahaanba qabiilka Tutiga laga cirib tiro dalka muddo 100 maalmood gudaheed ah laga bilaabo bishii April ee sanadkii 1994.
Garoonka gudihiisana ayaa laga maqlayey qaylo dheer iyo oohin, inkastoo ay boolisku isku dayayeen in ay qeyladaas iyo sawaxankasi wax ka qabtaan hadana dadka qeylinayey ayaa dib u xusuustay musiibadii ka dhacay wadankasi muddo hada laga joogo 20 sano.
Waxaa garoonka lagu qabtay baroordiiqda ku sugnaa kumanaan reer Rwanda ah, waxaana halkaas dhallinyaro badan kusoo bandhigeen qaabkii xasuuqu u dhacay, iyadoo muddo yar gudaheed gudaha garoonka lagu arkay dad daadsan oo lagu matalayo dadkii ay laayeen Tutigu.
Dalka Rwanda ayaa haatan waxaa ka socda labo todobaad baroodiiq ah, waxaana madaxweynaha dalkaas, Paul Kagame uu shiday d shumac shidnaan doona 100 maalmood, taasoo u dhiganta tirada maalmihii uu socday xasuuqa dadka badani ku dhinteen.